I-2018 i-RFC CD Printer PC World China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-CD e-Philippines,Inani lephrinta yeCD,I-Printer Price Price eNdiya
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-CD > I-2018 i-RFC CD Printer PC World
I-2018 i-RFC CD Printer PC World
I-2018 I-RFC CD Iphrinta ye-PC World iyakwazi ukunyathelisa ku-CD, ukuhlobisa ikhaya, isikole, isitolo, ibha, nokunye okunye.Iphrinta ye- CD efanelekayo emanzini ethatha iCD, udonga, ingilazi, tile njll.
Iphrinta ye-CD ye-Philippines uhlobo oluthile lokungena othintana nohlobo lwe-jet uhlobo lwemishini ye-digital, uhlelo lwayo lubanzi kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
3) Uma nginenkinga yobuchwepheshe, ungasisiza kanjani ukuyixazulula?
12 Iwaranti yeminyaka emithathu yemishini yethu. Ngesikhathi sewaranti, sizothumela izingxenye zamahhala zokufaka esikhundleni lapho izingxenye eziphukile kufanele zibuyiselwe emuva.
Izici eziwusizo ze- CD yethu ye-Printer Price RF-A3UV:
2. I- Printer Price ye-CD ingafakwa nge-Height Detecting Sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. I- CD Printer Price eNdiya I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Inani lephrinta lomshini we-CD Xhumana Nanje
Iphrinta ye-CD e-Philippines Inani lephrinta yeCD I-Printer Price Price eNdiya Iphrinta yezinkuni e-Philippines Iphrinta ye-UV ephrintiwe e-Philippines Iphrinta ye-CD Best Iphrinta ye-Dtg ye-wholesale Iphrinta ye-UV ethebhulethi yasePhilippines